विश्वास गर्नेहरूको रूपमा डरलाई जित्ने W तरिकाहरू | प्रार्थना अंकहरू
घर ईश्वरीय बैठक विश्वास गर्नेहरूको रूपमा डरलाई जित्न W तरिकाहरू
विश्वास गर्नेहरूको रूपमा डरलाई जित्न W तरिकाहरू
आज हामी विश्वासको रूपमा डरलाई हटाउन ways तरिकाहरूसँग व्यवहार गर्नेछौं। डर भनेको चिन्ता वा जिज्ञासाको उपस्थिति हो जुन अनिश्चितताको भावनाले सिर्जना गरेको हो। हामी सबैलाई हाम्रो डर छ, कुनै स्त्रीबाट जन्मेका कुनै पुरुष छैनन् जुन डराउँदैन। हामी धेरै कुरा डराउँछौं। केहि मानिसहरु डर लाग्छ कि उनीहरु जीवनमा असफल हुन्छन्। धेरै कोमल उमेरमा, उनीहरू असफलताको डरले बाँधिएका छन्। यो डर कहिलेकाँही ईन्धन हुन्छ जुन केहि ईन्जिनियरले केहि जीवनमा ठिक चीज गर्न सक्दछ। यद्यपि तिनीहरूको डरबाट सकारात्मक प्रभाव भएका व्यक्तिहरूको तथ्या .्क उनीहरूको तुलनामा केही होइन जुन उनीहरूको डरले विनाशतिर लगिएका थिए।
परमेश्‍वरले उनलाई प्रचार गर्न पठाउनु भएपछि अगमवक्ता जोनाथन डराए। आफूले परमेश्वरको निर्देशन उल्ल .्घन गर्नुपर्ला कि भनेर तिनी डराएका थिए। ऊ अर्कै बाटोमा लाग्यो किनभने ऊ आफ्नो हृदयमा साह्रै व्याकुल थियो। डरको वेदीमा यति धेरै जीवन र गन्तव्यहरू नष्ट भएका छन्। यो जान्नु महत्त्वपूर्ण छ कि डर एक्लै यात्रा गर्दैन, चिन्ता र चिन्ताको साथ आउँदछ। चिन्ताको उपस्थितिले समस्या सिर्जना गर्दछ जुन पहिलो स्थानमा अवस्थित छैन। धर्मशास्त्र को पुस्तक मा भन्छन्2तिमोथी 1:7परमेश्वरको लागि हामीलाई डर आत्मा दिइएको छैन भएकोछ; तर शक्ति र प्रेम को, र एक ध्वनि मन।
हामी अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले, विश्वासको जीवनमा डरको केही नकारात्मक प्रभावहरू द्रुत रूपमा हाइलाइट गरौं।
विश्वासमा डरको नकरात्मक प्रभावहरू
शत्रु एक विशाल शिकारी बन्छ
डरले तपाईंलाई शत्रुको शिकार बनाउँछ। त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जसको जीवन शत्रुको आत्माले डराएको छ। जब तपाईलाई डरको भावनाले छोपिएको हुन्छ, तपाईलाई थाहा छैन वा भगवानले तपाईंको निम्ति धेरै प्रतिज्ञाहरू राख्नुभएको छ भनेर जान्नु हुन्न।
यसले शत्रुलाई सिकारी बनाउँछ। कुनै पनी जब तपाइँ क्रसमा तपाइँको मार्ग पत्ता लगाउन कोशिस गर्नुहुन्छ, दुश्मनले तपाइँलाई तपाइँको विगतको सम्झना गराउँदछ र तपाइँ यति डराउनुहुन्छ कि तपाइँलाई के गर्ने थाहा छैन।
यसले बेचैनी निम्त्याउँछ
के तपाईंले कहिल्यै कुनै पुरुष वा महिला देख्नु भएको छ जो डराउँछ र अझै शान्त छ? कुनै मानिस जसको जीवन डरले बाधा पुर्‍याउँछ, त्यस्ता मानिस सधै समाधानको खोजीमा भागिरहन्छ। यसैबीच, त्यस्ता मानिस जोखिममा पर्छन् र सजिलै बहकाउन वा भ्रममा पार्न सकिन्छ जुन उनीहरूले डराउँछन्।
धेरै मानिसहरूले आफ्ना सृष्टिकर्तालाई बिर्सेका छन्, उनीहरूले बिर्सेका छन् कि ख्रीष्टले तिनीहरूका पापहरूको प्रायश्‍चितको लागि कलवरीको क्रूसमा रगत बगाउनुभएको छ। तिनीहरू समाधान खोज्न थाल्छन् जहाँ यो अवस्थित छैन।
यसले अचानक मृत्यु निम्त्याउन सक्छ
डर पुरुषहरूको सबैभन्दा ठूलो हत्यारा हो। यो यति डरलाग्दो छ कि यसले रक्तचाप निम्त्याउन सक्छ जसले फलस्वरूप यस्तो व्यक्तिको ज्यान लिनेछ। तपाई जुनसुकै परिस्थितिको सामना गरिरहनु भएको छ, परिस्थिति जतिसुकै डरलाग्दो नै किन नहोस्, सधैं दृढ विश्वास राख्नुहोस्।
डर हटाउन W तरिकाहरू
परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नुहोस्
विश्वासको रूपमा डरलाई जित्न सक्ने उत्तम उपायहरूमध्ये एक सही जानकारी हुनु हो। तपाईंको जीवनको लागि परमेश्वरको सबै प्रतिज्ञाहरूका बारे जान्नको लागि परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नुहोस्। यी प्रतिज्ञाहरूले तपाईंको दिमागलाई सुसज्जित पार्नेछ र तपाईंलाई थाहा दिनेछ कि भगवान हरेक अवस्था समाधान गर्न सक्षम हुनुहुन्छ।
याद गर्नुहोस् शास्त्रले भन्छ गन्ती २:23: १ God परमेश्वर मानिस हुनुहुन्न, उहाँ झूट बोल्नुहुन्न, न त मानिसका पुत्रले, उसले पश्चात्ताप गर्नुपर्छ। के उहाँ भन्‍नुभयो, र के गर्नुहुन्न? वा बोलेको छ, र के त्यसले यसलाई राम्रो बनाउँदैन? यसको मतलव तपाईका जीवनका लागि परमेश्वरका सबै प्रतिज्ञाहरू पूरा हुनेछन् तपाईको परिस्थितिलाई पार गर्दै नै। यदि परमेश्वरले येशू ख्रीष्टमार्फत महिमाका निम्ति आफ्ना सबै सम्पत्तिहरू अनुसार तपाईंको सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भने, तपाईंले परमेश्वरमा भरोसा राख्नुहुनेछ कि उहाँले त्यो पूरा गर्नुहुनेछ।
जान्नुहोस् र विश्वास गर्नुहोस् परमेश्वरको
दानियल ११:11२ र करारको विरुद्धमा खराबी गर्नेले चापलुसी गरेर भ्रष्ट पार्नेछ: तर ती मानिसहरू जो आफ्नो परमेश्वरलाई चिन्छन् तिनीहरू शक्तिशाली हुनेछन् र शोषण गर्छन्।
धर्मशास्त्रले भन्छ कि जसले आफ्ना भगवानलाई चिन्छ उनीहरू बलियो हुन्छन् र तिनीहरूले शोषण गर्छन्। कुनै व्यक्तिले परमेश्वरलाई चिन्नु र उहाँमाथि विश्वास गर्नु सम्भव छैन। तपाईंले भगवानलाई चिन्नुपर्दछ, र तपाईंले यो जान्नुपर्दछ कि उहाँलाई लगनशील भई खोजी गर्नेहरूलाई प्रतिफल दिनुहुन्छ।
भगवानमा भरोसा राख्नुको मतलब तपाईले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान ईश्वरमा राख्नुहुन्छ। तपाईं आफ्ना सबै चिन्ताहरू, डर र चिन्ताबाट बाहिर हुनुहुन्छ किनकि तपाईं ईश्वर हुनुहुन्छ। जब जीवनको समस्या तपाईंमाथि आउँछ, तपाईं अझै भगवान मा विश्वास गर्नुहुन्छ कि उहाँ महान् र शक्तिशाली हुनुहुन्छ तपाईंलाई बचाउनको लागि। धर्मशास्त्रले भन्छ कि कसले बोल्छ र यो आउँछ जब परमेश्वरले आज्ञा नगरेको थियो। तपाईंको जीवनलाई कसले मार्दैछ? भगवानलाई विश्वास गर्नुहोस्। उसले भनेको छ कि तिमी मर्ने छैनौ तर जीवित मानिसहरुको देशमा उसको कार्यहरू घोषणा गर्न बाँच्नेछौं।
पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर्नुहोस्
तपाईंको डरलाई हटाउने उत्तम उपायहरू मध्ये एक पवित्र भूतमा प्रार्थना गर्नु हो। १ कोरिन्थी १:: who जसले अन्य भाषामा बोल्छ उसले आफैलाई बढाइ दिन्छ तर भविष्यवाणी गर्नेले मण्डलीको उत्थान गर्छ। जब तपाईं अन्य भाषाहरूमा बोल्नुहुन्छ, हामी आफैंलाई सम्पादन गर्दछौं। हामी आत्माको क्षेत्रमा निर्माण गर्छौं।
त्यहाँ कोही व्यक्तिहरू घरमा एक्लै बस्न डराउँछन् किनकि उनीहरू शत्रुबाट आक्रमक हुन्छन्। यो त्यो डर बाट एक तरीका हो। भगवानले हामीलाई डरको आत्मा दिनुभएन बरु छोरालाई रोक्न कोशिपको आत्मा दिनुभयो। जब तपाईं त्यस घरभित्र पस्नुहुन्छ, पवित्र आत्मामा प्रार्थना गरेर सबै राक्षसी शक्तिलाई बन्धन अन्तर्गत राख्नुहोस्। यसले तपाईंलाई डरमाथि विजय हासिल गर्दछ।
परमेश्वरसँग शान्ति खोज्नुहोस्
रोमी 8: 31 यसकारण यस विषयमा हामीले के भन्ने? यदि भगवान is हाम्रो लागि, को हुन सक्छ हाम्रो विरुद्धमा?
शत्रुहरूले हाम्रो जीवनलाई डरले काटिदिनुको एक कारण यो छ कि हामी हाम्रो सृष्टिकर्तासँग शान्तिमा छैनौं। जब हामी परमेश्वरसँग संशोधन गर्दछौं, शत्रुले हामी माथि अधिकार गर्न सक्दैन। हामी अब उसो गर्न सक्दैनौं कि शत्रुले के गर्छ होला किनकि हामी परमेश्वरसँगै उभिरहेका छौं।
अघिल्लो लेखमाN तरीकाले एकलको रूपमा व्यभिचारबाट टाढा
अर्को लेखमालोभमाथि विजय हासिल गर्न प्रार्थना पोइन्टहरू
एन्जेला थॉमस शेफील्ड जुन 19, 2021 8 मा: 53 बिहान
कृपया मलाई र मेरो परिवारको दिमाग, शरीर, आत्मा र प्राणहरूमा सफलता र छुटकाराको लागि छुनुहोस् र मसँग सहमत हुनुहोस्। हामी जिउँदो कोखाहरूमा परमेश्वरको भलाई देख्नेछौं। मेरो छोरा, ईसाई १,, को लागि प्रार्थना गर्नुहोस् पशु चिकित्सक चाहिन्छ। उसलाई आफ्नो पशु चिकित्सक प्राप्त गर्न मद्दत गर्न। सहायक प्रमाणपत्र र एक राम्रो काम र उसको वित्तीय।
हाम्रो कथा राम्रोको लागि बदल्नुहोस् ताकि सबैले थाहा पाउनेछन् कि यो हाम्रो पक्षमा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, आफूलाई हाम्रो जीवनमा शक्तिशाली देखाउनुहोस् भगवान, किनभने हामी तपाईंलाई माया गर्छौं, तपाईंलाई आदर गर्छौं, तपाईमा पर्खन्छौं र तपाईं म एक्लै आशा गर्नुहुन्छ, तपाईमा हामी भरोसा गर्छौं र भरोसा गर्छौं … धन्यबाद प्रभु येशूमा आमेन
मेरी जुलू जुन 23, 20217मा: 54 बिहान
पास्टरलाई धन्यबाद दिनुहोस् किनभने हामीहरू वास्तवमै एक महान् र शक्तिशाली ईश्वर हुनुहुन्छ। हामी तपाईको जीवनका लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौं, हामीलाई सँधै शब्दहरू दिनुहुन्छ।
असामयिक मृत्युको विरूद्ध शक्तिशाली घोषणा
अलौकिक प्रावधानको लागि प्रार्थना पोइन्टहरू